» महेन्द्रराज बराल र अस्मिता अधिकारीको ‘रुमालै चिनो धोई–धोई’ चर्चामा
महेन्द्रराज बराल र अस्मिता अधिकारीको ‘रुमालै चिनो धोई–धोई’ चर्चामा
१० श्रावण २०७७, शनिबार २१:१५
मकवानपुर, १० साउन । चर्चित गायक महेन्द्रराज बराल र गायिका अस्मिता अधिकारीको ‘रुमालै चिनो धोई–धोई’ बोलको गीतले नेपाली साँगितिक बजारमा चर्चा कमाएको छ । गायक बरालको अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको गीतको म्यूजिक भिडियोलाई दर्शक श्रोताले रुचाएका हुन् ।
हरि लम्सालको शब्द, संगीत र एरेञ्जमा तयार भएको गीतमा युवा जोडीको प्रेमको प्रसंग समावेश गरिएको छ । गीतमात्र नभई गीतको म्युजिक भिडियोले समेत दर्शकको मन जित्न सफल भएको छ । गीतको म्यूजिक भिडियोमा चर्चित कलाकार लक्ष्मी बर्देवा, जीवन भट्टराई र गायक बरालले अभिनय गरेका छन् । बुद्ध थापाको टिमले छायाँकन गरेको म्युजिक भिडियोलाई लक्ष्मी र जीवनले नै निर्देशन गरेका हुन् । गीतको म्यूजिक भिडियोलाई विष्णु खड्काले सम्पादन गरेका हुन् । हेर्नुहोस् म्युजिक भिडियो–
मुटुदेखि मुटुसम्म एपिसोड–१० विवाह, डिभोर्स र वास्तविक प्रेम
विवाह र डिभोर्स अनि वास्तविक प्रेमका बारेमा समाजले राख्ने गलत सोच र त्यसको वास्तविकता के छ ? यस एपिसोडमा तपाईका सन्देशहरु सहित यसै विषयमा चर्चा गरेका छौँ । रेडियो अनमोलबाट २०७६ असार ३ गते प्रसारित कार्यक्रम मुटुदेखि मुटुसम्मको यो युट्युब भर्सन हो । यसमा गीत र प्रोमो तथा फिलरहरुलाई हटाईएको छ । यसमा तपाईले तपाईले पठाउनुभएकै एसएमएस र कमेन्टहरुलाई सुन्न सक्नुहुन्छ र तपाईका लागि प्रेम सन्देशहरु पनि पाउनुहुन्छ । यसमा क–कसको सन्देश छ सुनेर, हेरेर साथ दिनुहोस् । यो भिडियोलाई लाईक र कमेन्ट गरिदिनुहोला । हेर्नुहोस् पुरा भिडियो–
मुटुदेखि मुटुसम्म एपिसोड–९ विवाहपछि वास्तविक प्रेमको सुरुवात हुन्छ
हामीले सोचे जस्तै प्रेम यौवनमा मात्रै सुरु हुन्छ ? किशोरावास्थामा मात्र प्रेम हुन्छ ? वास्तवमा विवाहपछि वास्तविक प्रेमको खेती गर्न कतिको मेहनत गर्नुपर्छ ? यस एपिसोडमा तपाईका प्रेमका सन्देशहरु सहित यसै बारेमा चर्चा गरिएको छ । रेडियो अनमोलबाट २०७६ जेठ २८ गते गते प्रसारित कार्यक्रम मुटुदेखि मुटुसम्मको यो युट्युब भर्सन हो । यसमा गीत र प्रोमो तथा फिलरहरुलाई हटाईएको छ । यसमा तपाईले तपाईले पठाउनुभएकै एसएमएस र कमेन्टहरुलाई सुन्न सक्नुहुन्छ र तपाईका लागि प्रेम सन्देशहरु पनि पाउनुहुन्छ । यसमा क–कसको सन्देश छ सुनेर, हेरेर साथ दिनुहोस् । यो भिडियोलाई लाईक र कमेन्ट गरिदिनुहोला । हेर्नुहोस् पुरा भिडियो–